Slackware 14 ပြီးနောက် | ဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
Slackware ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ 14
DMoZ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ပြီးတာနဲ့ငါတို့ပွုပါပွီ Slackware တပ်ဆင်ခြင်း 14အချို့အသေးစားညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။
1 ၁။ အသုံးပြုသူအသစ်ထည့်ပါ
2 ၂။ စနစ်ဘာသာစကားကိုပြောင်းပါ
3 ၃။ system ကို update လုပ်ပါ
5 LILO ကိုပြုပြင်ပါ
၎င်းကို Linux လောကတွင်အမြဲတမ်းအကြံပြုသည်။ NO ၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုပါ အမြစ် အလုပ်လုပ်ရန်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကိုဖန်တီးရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကို command မှတစ်ဆင့်ရရှိသည် adduser.
ဘယ်မှာ ဖြစ်နိုင်တယ် audio, lp, optical, သိုလှောင်မှု, ဗီဒီယို, ဘီး, ဂိမ်းများ, ပါဝါ, စကင်နာ။
ငါတို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့သုံးစွဲသူလည်းရှိဖို့လိုတယ် အမြစ်အခွင့်ထူးဖိုင်ကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုရရှိသည် ဆံပင်ငါ့ကိစ္စမှာငါသုံးမယ် vim.
သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို "ပိုမိုလုံခြုံသော" နည်းလမ်းဖြင့်ဖြတ်သန်းနိုင်သည်
ကျနော်တို့ရှာနှင့် ငါတို့ uncomment မျဉ်းကြောင်း (ကျွန်ုပ်တို့သည် # အက္ခရာကိုဖယ်ရှား)
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသူနှင့် log in လုပ်ပါ။
ကျနော်တို့သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဆိုရင် KDEကျနော်တို့ကနေနိုင်ပါတယ် system ကို ဦး စားပေး ဘာသာစကားနှင့်ကီးဘုတ်အဆင်အပြင်ကိုပြောင်းပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ထို desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ application များကိုသာထိခိုက်လိမ့်မည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်စနစ်၏ဘာသာစကားကိုပြုပြင်ရန်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတင်ပို့ရမည် တည်းဖြတ်ခြင်း ဖိုင်ကို lang.sh
ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်းကိုရှာဖွေ။ မှတ်ချက်ပေးသည် (အစတွင်နံပါတ် # ထည့်သည်)
သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည် es_MX.utf8 သင့်နိုင်ငံ၏ဘာသာစကားဖြင့်ဖြစ်သည်။
တစ်ဘို့ ဘာသာစကားစာရင်းအပြည့်အစုံ သင့်ရဲ့ console ကိုအတွက်ထောက်ခံအမျိုးအစားကို
သင်သည် bash မှလွဲ၍ အခြား shell တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါက၎င်းဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်သည် lang.csh
၃။ system ကို update လုပ်ပါ
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်ဟာကိုရွေးပါ repositories ငါတို့တည်နေရာနှင့်အနီးဆုံးရှိလိမ့်မည်။ ဤအတွက်ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တည်းဖြတ်လိမ့်မည် ကြေးမုံ ကျနော်တို့သင့်လျော်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားသောလိုင်းများ uncommenting ။
ဌာနခွဲ၏ဆာဗာများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိနိုင်သည် ယခု ပိုပြီး up-to-date ဖြစ်အောင် packages များပါဝင်သည်
ဘာလဲ၊ ပိုကောင်းတယ်၊ တည်ငြိမ်တဲ့ဗားရှင်းဒါမှမဟုတ်လက်ရှိကဘာလဲ။
Slackware တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အလွန်မလွယ်ကူပါ၊ Debian Squeeze နှင့် Wheezy တို့အကြားဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အတိအကျမဟုတ်ပါ။ တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းသည်အလွန်ပွတ်တိုက်သော်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည့်လုံခြုံရေးပြissuesနာဖြစ်သည့်ဌာနခွဲ မှလွဲ၍ ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိပါ ယခု ၎င်းသည်လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေသည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမကြာခဏရရှိသည်၊ သို့သော်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိယိုယွင်းပျက်စီးစေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တကယ့်ပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည် slackpkgအသုံးပြုသူအနေဖြင့်သင်ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည် အမြစ်.
ခ) ထည့်သွင်းထားသော package များသည်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံမည့် update လုပ်ထားသော key ကို install လုပ်ပါ။ (ပထမဆုံးအကြိမ်သာလုပ်သည်)
ဂ) ထည့်သွင်းထားသော package များအားလုံးကို update လုပ်ပါ
)) အသစ်သော packages များ Install လုပ်ပါ (အကယ်၍ သင်သည်လက်ရှိဌာနခွဲကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ထိုဗားရှင်း၏ package အသစ်များကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ )
ဒီဖြန့်ဖြူးရေးကို install လုပ်ပြီးသောသုံးစွဲသူအများစုသည်ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းသုံးစွဲသူများကိုစတင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုမိသောအခါရှုပ်ထွေးနေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ စ.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Slackware ကိုတီထွင် ပုံမှန်အားဖြင့်စတင်သည် runlevel: 3၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီဖြန့်ဖြူးအတွက်စတင်ရန်လိုအပ်သည် runlevel:4ဂရပ်ဖစ် mode ကိုအလိုအလျောက်ရယူရန်၊ ပြင်ဆင်ရန် ဖိုင်ကို inittab
ပုံမှန်အားဖြင့် Lilo စောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်ကို ၂ နာရီခွဲ (တစ်စက္ကန့်၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံလျှင် ၁၂၀၀) သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်နည်းနည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရေတွက်ခြင်းကိုရပ်တန့ ်၍ system load ကိုဆက်လက်ရပ်တန့်ရန်သော့ကို နှိပ်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အပေါ်ဤစောင့်ဆိုင်းအချိန်ပြုပြင်မွမ်းမံရန် Lilo ၎င်း၏ configuration ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည် အမြစ်
ဒီတော့၏မျက်နှာပြင် Lilo ၎င်းကို ၅ စက္ကန့်သာအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည် (အချိန်ကို ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းသတ်မှတ်ရမည်။ သင့်လျော်သောပမာဏကိုအသုံးပြုနိုင်သည်) ။
Slackware ကို install ပြီးတာနဲ့ငါစဉ်းစားတာကဒီဖြန့်ဖြူးရေးမှာပါတဲ့ packets တွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မယ်ဆိုတာနောက်တစ်ကြိမ်မှာငါပြောမယ်။
အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် krel ငါ့ကို ksuserack [at] gmail [dot] com] ကသူရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုဒီဆောင်းပါးနဲ့စီးရီးထဲမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Slackware ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ 14
ဟုတ်ပါတယ်၊ Linux မှစတင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အမှားလုပ်မိသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ကမကထပြုမှု။
အသုံးပြုသူအားလုံး = (အားလုံး) အားလုံး
ပိုဆိုးတာက NOPASSWD ထည့်တာ
[YaoMing] အကယ်၍ သင်ဟာ windowsers တွေဖြစ်ပြီး admin ရဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးရပ်တန့်ချင်တယ်ဆိုရင် Windows Vista၊ Debian ပြီးတော့ Slackware [/ YaoMing] နဲ့စတင်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။
အကယ်၍ မင်းကငါလိုပဲ kde မှာ desktop effect တွေဂရုမစိုက်ဘူး
အဆင့်မြှင့်တင်လိုလျှင် root အနေဖြင့် log in လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ဒါကြောင့်ငါ sudo နှင့်အတူ update လုပ်လို့မရပါဘူး?
အသစ်ထည့်သွင်းထားသော system တစ်ခုသည် ram မည်မျှရှိသနည်း။
1Gb ram ရှိတဲ့ hp mini netbook အတွက်သင့်တော်ပါသလား။
(နှင့်တစ်ခုတည်းသော OS အဖြစ်လျှော့ချ)
ငါ lilo နှင့် grub မျှသာသုံးနိုင်သည်။
ဟဟားဟား၊ မင်းခေါင်းကို xD နဲနဲပစ်လိုက်တယ် ...
root ကို log in လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုယခုပင်ကျွန်ုပ်လေ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Slackware ၏အလွန်အသစ်အသုံးပြုသူဖြစ်ပါသည်။ = P ... သို့သော်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချပါ ငါလုံးဝသေချာသည်အထိငါကဒီမှာငါ့အဆွဲဆောင်မှုထားခဲ့ဖို့လာလိမ့်မည် ...
RAM ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ ငါစိတ်ကူးမရှိသေးဘူး ... ငါ netbook ပေါ်မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်။
အကယ်၍ သင် current ကိုရွေးချယ်ပါက (အလွန်တည်ငြိမ်သော) အကယ်၍ ၎င်း packets များသည်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများမှရှောင်ရှားရန်အကြိမ်ရေများစွာပြင်ဆင်ထားသဖြင့်သင်အမှန်တကယ်လေးနက်သောပြproblemsနာများရှိသည်ဟုမထင်ပါ။
သင်၏နောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုသေချာစွာမဖြေဆိုနိုင်သော်လည်း LILO installation ကိုကျော်ပြီး GRUB ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ပြbeနာမဟုတ်သင့်ဟုထင်ပါသည်။
hahahahahaha sorry, ငါအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေသည့်အခါ, ငါ့သိချင်စိတ်ကဤအရာများကိုစိတ်ထဲ၌ရုပ်တုကိုစုစည်းရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်၎င်းသည်ယုတ္တိဗေဒဖြစ်စဉ်နှင့်တူသည်။
သငျသညျအကြှနျုပျ၏မေးခွန်းများကို xDDD ဖြေဆိုရန်အလွန်ကြင်နာခဲ့ကြပြီ
sudo ကို run ရန်ထက် root အဖြစ် login သည်အများအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်လျှင် sudo ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မသုံးဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုဆာဗာတစ်ခုကဲ့သို့လည်ပတ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်သင် netbook ပေါ်တွင်မလိုအပ်သောအရာများကိုပိတ်ထားရန်လိုသည်၊ သင်ဖတ်ရန်ကောင်းသည်။ သင်ရှာရမည့် netbook အတွက် Slackware ထက်ပိုကောင်းသောရွေးချယ်စရာများရှိနိုင်သည်။
Lilo ကိုသုံးပေမယ့် grub ကိုသုံးဖို့သင်ခန်းစာတွေကိုတွေ့ပြီ။
KDE ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် 300 mb ram (ငါ့လက်တော့ပ်) မှာသုံးရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးလျော့နည်းဖို့ (သို့မဟုတ်အရမ်းများတယ်) ။
သင်ဟာ Slackware အသုံးပြုသူအသစ်ဖြစ်လျှင်လက်ရှိအခြေအနေကိုမေ့ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်၊ ခဏကြာမှဖြစ်လိမ့်မည်။
kde, မှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်ရင်ငါတို့ရဲ့ desktop ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးတယ်။
workspace အပြုအမူ >>> workspace >>> workspace အမျိုးအစား >>> desktop မှ notebook နှင့် voila သို့ပြောင်းလဲသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြု၍ သိမ်းသည်။ လေးစားပါတယ်
အထက်ပါအချက်များကိုဖတ်ရုံသာမကပဲကျွန်ုပ်သည် vm ၌စမ်းသပ်နေသော်လည်းကတိပေးသည်။ မူရင်း distro "hehehe" ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ပြောသလိုကတိက ၀ တ်ပဲ။
oo lol archol lol ကို install လုပ်ရန် gespadas လက်စွဲစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်အားသတိပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒရော့စ်များအားလုံးသည် ^ _ ^ ... ကဲ့သို့ကောင်းသောပုံရိပ်များကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါစေ။
Hehehe, ငါပြောတာအတူတူပဲ, အသုံးပြုသူများနှင့် XD ဘာသာစကား၏ပို။ အပေါ်။
အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါးများ၊ ဂုဏ်ပြုလွှာများ၊ installation လမ်းညွှန်နှင့်ဤနှစ်ခုစလုံးသည်အလွန်ပြည့်စုံပါသည်။ တကယ်တော့၊ Installation လမ်းညွှန်ဟာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့သမျှထဲမှာအပြည့်စုံဆုံးဖြစ်တယ်၊ များစွာသောငါကအရေးကြီးတယ်ထင်တဲ့ hard disk ကို partition လုပ်တာစတဲ့အဆင့်အချို့ကိုကျော်သွားတယ်။ ၎င်းနှင့်အတူအခြား distros များမှသုံးစွဲသူများသည် Slackware သည်တပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲလွန်းသည်ကိုသေချာစေရန်သေချာသည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲ၊ စနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်အနည်းငယ်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်မှအနည်းငယ်သောအကြံပြုချက်များ - လက်ရှိသတိထားပါ၊ သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်တကယ်မသိလျှင်မှလက်ရှိအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ လက်ရှိထုတ်ကုန်များသည်များသောအားဖြင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်များမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်နှင့်စနစ်သည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ သင် firefox ၏နောက်ဆုံး version ကိုလက်ရှိမှရယူလိုသည်ဆိုပါကပြproblemနာမရှိပါ။ သို့သော် kernel သို့မဟုတ်အရေးကြီးသော system element / library တစ်ခုခုသည်လက်ရှိ ssssss တွင်ရှိလျှင်ဥပမာ glibc ကို update ပြုလုပ်ခြင်းသည် applications များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုပြန်လည်စုစည်းရန်ရှိသည်။ အလုပ်လုပ်သော kernel ကို slackpkg နှင့်မွမ်းမံရန်လည်းမသင့်တော်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အနက်ရောင်စာရင်းတွင်ထည့်ရန်လိုအပ်သည် (အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အတွင်းပြသနာများမဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသင့်သနည်း) ။ upgrade-all ကိုဂရုစိုက်မည့်အစား slackware.com changelog တွင်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောအရာများဖြစ်သောဥပမာ firefox ကိုရှာဖွေပြီး firefox လုပ်ခြင်းသည်အခြားဘာမှမလုပ်ပါ။
Lilo screen သည် promp နှင့် timeout လိုင်းများအားမှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် (ဥပမာကျွန်ုပ်တို့တွင် Slackware နှင့်အခြားမည်သည့်အရာမျှတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက) ကိုကျော်သွားနိုင်သည်။
ရွှင်လန်းမှုနှင့်ဤအာကာသအတွင်း Slackware ပိုမိုတွေ့မြင်ရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။
မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပျင်းရိဝါရင့်ဝါရင့်သမားတွေကအမြဲတမ်းကြိုဆိုပါတယ်၊ ငါဒီဖြန့်ဖြူးမှုမှာအတွေ့အကြုံအများကြီးမရှိသေးပေမယ့်ငါအလုပ်လုပ်တယ် =) ...
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ယခုငါ VirtualBox တွင် Slackware ထည့်သွင်းခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သည်။
slackware တွင်သုံးစွဲသူအကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ "root" အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးချင်သောအက္ခရာသည်အုပ်စုတစုကိုထည့်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ Kuser ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအခွင့်အရေးကိုပေးပါ။ terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ရိုက်သည်။
အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတာနဲ့ဒီလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာပဲ။
Slackware သည် useradd ကိုဖန်တီးရန် script ကိုယူဆောင်လာသည်။ useradd သည်၎င်း၏အမည်ဖြစ်သည်။ adduser မှာ distros များအားလုံးရှိပြီး useradd သည် Slackware script ဖြစ်သည်။
slackware မှာ okular ကစာလုံးတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းပုံကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ adobe-reader (RPM) အထုပ်ကို ဦး ဆုံး install လုပ်ပြီးအဲဒါကို "slack" အတွက် executable file အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ Fedora မှာလိုပဲ၊ English version ကို update လုပ်တယ်။ ရလဒ်ကတော့အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်လို့ Adobe ad-reader binary ကို install လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ရလဒ်ကအပေါင်း။ သင်တပ်ဆင်ရန်သင်စိတ်ဝင်စားပါကဤလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
macromedia flash player ကို install လုပ်ရန်သတိပေးချက်များကို FLASH အပိုင်းတွင်ပထမဆုံးဖတ်ပါ။
နောက်ပိုင်း 32 နှင့် 64-bit များအတွက်လမ်းညွှန်။
Flash ကို install လုပ်ရန် Slackbuilds ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Slackbuilds ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်စသည်တို့ကိုဆောင်းပါးနှစ်ပုဒ်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်အနည်းငယ်ပိုမြန်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့ကိုသင်ထံသို့ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
အလွန်ကောင်းမွန်သောထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ eros သည် slack 14 64 bits ကိုသာ install လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် slack 12.2 ကိုစွန့်ခွာရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ထိခိုက်ပါသည်။ မျိုးဆက်သစ်လက်ပ်တော့ပ်ဝယ်ယူပြီးနောက်ကံမကောင်းပါက၎င်းသည် slack 12.2 ကိုမပံ့ပိုးပါ။
ကောင်းပြီဒီနေ့ငါဟာအလုပ်များတဲ့ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်ပါ .. ပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုကျန်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောပြပါ့မယ်
ငါသူ့ကိုဤမှတ်ချက်ကြွေးတင်နေသည်။ Slackware ဆိုတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုရဲ့ဒီရတနာကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ မ်းသာပါသည်။ )
အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ Slackware ကိုကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်တော့ပ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီး VM မရှိဘူး။
PS: ငါ XFCE ကိုသုံးတယ်၊ အထက် panel ရဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်မမြင်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာက WIFI ကွန်ယက်များအကြောင်းကြားစာဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်အင်တာနက်ကြိုးဖြင့်ရောက်ရှိနေသည်။ : S
အိုင်တီကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်၎င်းကိုဖြုတ်ပစ်ရန်သင့်တွင်အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ပိုကောင်းသော DEBIAN နှင့်ဝေး BY
သင်၏ထင်မြင်ချက်အရ၊ သင်သည် gnu / linux သို့အသစ်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည် ၎င်းင်းကို linux ဟုအမည်ပေးသည့်အခါ Windows အသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်အားသတိပေးသည်။
XFCE ကို virtual machine တွင် install လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် KDE environment ကို install လုပ်ရန်အတွက် option ကို deactivate လုပ်ပါ။ သို့သော်ဤအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ပြီးနောက် KDE applications တော်တော်များများကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပါပြီ။ Geforce 8600 အတွက်လည်း Nvidia drivers တွေကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ။ ကြီးစွာသောသင်ခန်းစာ😀
kingler7345 ကို Reply
နည်းပြဆရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ distro ကိုစမ်းသပ်လိုသည် like ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုလိုအပ်သည်
မင်္ဂလာည၊ ပထမ ဦး ဆုံးအထိန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါပြောချင်တာကသူတို့ဟာဒီ Linux Linux လောကမှာနည်းနည်းလေးအသစ်အဆန်းပဲ၊ ငါဆက်လေ့လာချင်တယ်။
အထူးသဖြင့်အမှတ် ၂ တွင်ဘာသာစကားကိုစပိန်ဘာသာသို့ပြောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည် GT နေရာချထားခြင်းအစား MX ကိုအစားထိုးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိစ္စတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Virtual စက်ကိုပြန်လည်စတင်သည်။ ငါ့ကိုသတိမထားမိအောင်လုပ်နိုင်တယ်
မှတ်သားသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်သည် console မှမဟုတ်ဘဲ Slackware အတွင်းဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်သည့် text editor တစ်ခုမှတည်းဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသင့်သည်။
ယခုသင်သည် KDE ၌ဘာသာစကားပြောင်းရန်လိုသည်။ System Preferences တွင်ပြုလုပ်သည်။
မင်းရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပြီ၊ System Preferences တွင်ဘာသာစကားပြောင်းပြီးဖြစ်သော်လည်းပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်၌သာရှိနေသေးသည်ဟုငါပြောနိုင်သည်။
အလွန်ကောင်းပေမယ့်သင်အသံကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည် (alsa or press ကိုမည်သည့်တပ်ဆင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ)
kernel ကို patch လုပ်စရာမလိုပဲ startup splash (system) plymouth or fbsplash (သို့) splashy ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသင်ညွှန်ပြဖို့လိုတယ်။ (ဒီအတွက်ဝံပုလွေလူသားတွေထဲကိုဝင်ဖို့မလိုချင်ဘူး)
ကျွန်ုပ်တွင် tar.gz တွင် Mk2 drivers hercules ရှိသော်လည်း၎င်းဖိုင်တွင် RPM driver နှင့် hdjcpl လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည် Slackware ပုံစံသို့ပြောင်းလဲနိုင်သလား။ ဒါအလုပ်ဖြစ်မလား
မှီခိုခြင်းများသည်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ dkms, kernel header များနှင့်မှတ်မိသေးသည်
system boot မှ Bootsplash
တတိယပါတီဒရိုင်ဗာများတပ်ဆင်ခြင်း (ဥပမာ - .deb နှင့် .Rpm ပုံစံများနှင့်မတူပဲ၊ hercules console DJ DJ Mk2) အတွက်တပ်ဆင်ခြင်း -
မီနူးများကို Unity စတိုင်တပ်ဆင်ရန် gnome နှင့် appmenu-indicator ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
suspem / hibernate အချို့သော daemons များကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေရန် reboot လုပ်ရန် configure (ဥပမာ jackd, pulseaudio စသည်)
Debian / Arch ကဲ့သို့ third-party package များကို install လုပ်ပါ
ငါအသစ်ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ငါမင်းကို PDF အတွက်အတူတကွစုဆောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကတိနဲ့အတူငါနေခဲ့တယ်၊ အရေးအသားကိုအပြီးသတ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Eliot ကကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ကိုယူဆောင်လာစေချင်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့အတူသင့်ကိုလက်စွဲစာအုပ်ကောင်းတစ်ခုထားနိုင်ပါတယ်။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ အဲ့ဒီကျန်နေသေးတဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော့်ဆောင်းပါးကို Slackware 14 အကြောင်းနဲ့ slapt-get package manager နဲ့ Alien နဲ့ Slacky.eu backports စတဲ့ helper plugins တွေအကြောင်းရေးသားဖို့ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီ။ အဆိုပါ slackbuilds အပေါ်မူတည်သည်။
ပြန်လည်ဖြေကြားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်ထပ်မံဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ရင်၊ မင်းငါ့ကိုဖြေကြားခဲ့တာတောင်မှမသိဘူး၊ ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့လက်ကိုငါကိုင်ထားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်🙂
ငါ Unity နှင့် Gnome သေလုနီးပါးမုန်းသော Ubuntu မှထွက်ခွာခဲ့ပြီး Slackware အဟောင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည် (Wifislax မှတစ်ဆင့်၎င်းသည် distro စနစ်မဟုတ်ဘဲတိကျသောကိရိယာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်း .. ။ ) ဒါပေမယ့်သင်ဟာ S မှာအလုပ်လုပ်နေတယ် ...
ကျွန်ုပ်အား W $$$ နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ Photoshop ဖြစ်သည်။ Gimp သည်စိတ်ကူးကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းမရောက်ရှိပါ။
PS သည် Slackware ကို WINE အောက်တွင်လက်ခံနိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့်လမ်းလျှောက်သည်။ သင် TEXT tool ကိုအသုံးပြုသည်အထိမနှောင့်ယှက်ဘဲပိတ်နိုင်သည်။ Ubuntu သည်အချို့ဗားရှင်းများတွင်တူညီသောပြသနာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင် SOURCES အလွန်များပြားသည်ကိုပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဘယ်မှာလဲ။ W7 အတွက်ငါ့အခန်းကန့်မှာလား ဟုတ်ပါတယ်၊ WINE ကရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖို့ W ထဲကို ၀ င်လာရင်၊ အဲ့ဒီမှာ install လုပ်ထားတာတွေလိုအပ်လို့ပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူး ...
မင်းမှာအဖြေဒါမှမဟုတ်ဗာဒံခွံမာသီးကလှည့်စားမှုတစ်ခုခုရှိမလားမသိဘူး။ သို့သော် W $$$ ၏အကြီးမားဆုံးသောနှောင်ကြိုးမှာjoío PS ဖြစ်သည်။ (အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်ညှိနှိုင်း။ မရပါ၊ GIMP သည်ကောင်းသော်လည်း၊ ၇ နှစ်ototchopတွင် ၇ နှစ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ် စတင်၍ မရပါ။ )
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Slackware တွင် GIMP, LibreOffice စသဖြင့်အသစ်သောဖောင့်များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ FONT MANAGER သို့မဟုတ်အလားတူ Slackware အတွက် tff ၏ကြည့်ရှုသူ-installer သင်သိပါသလော။ သူတို့ကိုသင်တစ် ဦး ပြီးတစ် ဦး ထည့်သွင်းရန်လိုပါသလား။ အဘယ်သို့နည်း
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... မင်းဒီအကြောင်းသိသလား။
သင်၏အလုပ်နှင့်စိတ်ဝင်စားမှုအတွက် Mutxas zenkius XD
ကောင်းမွန်သော entry, ငါဘလော့ဂ်များအတွက် Slackware entries တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်, ငါ uu လွန်ခဲ့သော6နှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးထက်အများကြီးပိုသောအရာတစ်ခုခုကိုအထောက်အကူပြုဖို့ပဲ။ ပို။ Slackware အသစ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Quisa ။
Slackware သည်လုံခြုံရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်တည်ငြိမ်သောဌာနခွဲ၊ လက်ရှိနှင့်ယခင်ဌာနခွဲနှစ်ခုစလုံးသည်ယခင်ဗားရှင်းဟောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လုံခြုံရေးကိုအထူးအလေးပေးသည်၊ လုံခြုံမှုသည်မွမ်းမံမှုများကြာမြင့်စွာခံယူထားသောကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသေးပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်ရန်။
Slackware မှာသတိပေးချက်တွေပေးတဲ့အချိန်မှာ၊ ဒီ script ရဲ့တတိယအပိုင်းမှာ adduser စတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ script တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်က up key ကိုနှိပ်သည်။ မှော်အဖွဲ့များကသာမာန် desktop အသုံးပြုသူအတွက်ပေါ်လာသည်။ ဒီမှာ။
ထို့အပြင် graphical environment အတွက် xorgsetup လည်းရှိသည်။ Create the jdk နှင့် jre package သည်ဥပဒေရေးရာပြtoနာများကြောင့်ဆုတ်ခွာသွားသည်။ Koffice နှင့်ကွဲပြားသော Office suite ကို Install လုပ်ပါ။
slackware 14.2 ကို install လုပ်ရန်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်မလားဆိုသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်
ထို့အပြင် ping သို့မဟုတ် traceroute နှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် packets များလိုအပ်သည်။
Slackware သည်ဖြန့်ဖြူးသောဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအပြည့်အဝတပ်ဆင်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် disk space သိပ်မရှိပါက installation ၏အစတွင်သင်စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောသူများအားပယ်ဖျက်ခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းရန် package များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အကယ်လို့သင်ဟာပိုပြီးရိုးရှင်းတဲ့ linux ကိုပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်၊ dropper နဲ့အရာအားလုံးကိုပေးတဲ့ archlinux ကိုရွေးချယ်ပါ။
Pedro Herrero ဟုသူကပြောသည်
Slackware 14.2-current ကိုသာ install လုပ်ပြီးပါကယခုသင်ခန်းစာ၏အကူအညီဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲဖွဲ့စည်းမှုများကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Pedro Herrero အားပြန်ပြောပါ
အသစ် Nikon D5200 ကင်မရာ - ထူးခြားချက်များ